हिमालय उर्जाको आइपीओ बिक्रीमा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? – Himshikharnews.com
हिमालय उर्जाको आइपीओ बिक्रीमा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
२० चैत्र २०७५, बुधबार १२:५८
काठमाण्डौ । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले आज(बुधबार)देखि सर्वसाधारणका लागि १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डले यो कम्पनीलाई माघ २१ गते सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निश्कासन गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित यो कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित रामेछाप र दोलखाबासीका लागि गत कात्तिक ६ गतेदेखि ९ करोड ९० लाख आइपीओ निश्कासन गरेको थियो । यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि गरी २४ लाख ७५ हजार कित्ता निश्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १४ लाख ८५ हजार कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको हो । आइपीओमा छिटोमा चैत २५ गते र ढिलोमा बैशाख १९ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । कुल निश्कासित कित्तामध्ये ३ प्रतिशतले हुन आउने ४४ हजार ५५० कित्ता कम्पनीका कर्मचारीका लागि, ५ प्रतिशतले हुन आउने ७४ हजार २५० कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि र बाँकी रहेको १३ लाख ६६ हजार २०० कित्ता सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
इच्छुकले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ६ हजार ५०० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी गर्न लागेको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड फोरको रेटिङ दिएको छ । यसको अर्थ यो कम्पनीको अवस्था औसतभन्दा कमजोर भन्ने हो ।
कम्पनीको आइपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नवील इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमीटेड रहेको छ। यो कम्पनीको जारी पूँजी ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितलाई बिक्री गरिसकेको छ भने १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
कस्तो छ कम्पनीको अवस्था र प्रक्षेपण ?
कम्पनी ०७६/७७ बाट मात्र सञ्चित नाफामा हुनेछ । ०७५/७६ मा २ करोड बढी सञ्चित घाटामा हुनेछ । ०७६/७७ मा १३ करोड २९ लाख र ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कम्पनी अन्तर्गतका दुवै आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुन ६.२१ वर्ष लाग्नेछ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने समय ९.४३ वर्ष लाग्नेछ । उपल्लो खिम्ती(१२ मेगावाट) र अपर खिम्ती(७ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ७४ हजार रहेको छ । उपल्लो खिम्तीबाट वार्षिक ७ करोड ३६ लाख १२ हजार ५१९ युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, अपर खिम्तीले वार्षिक रुपमा ४ करोड २२ लाख ९१ हजार २४८ युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण कम्पनीको छ ।